Princess Cruises manapaka an'i Aostralia sy Nouvelle-Zélande hatramin'ny 27 Janoary 2022
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Princess Cruises manapaka an'i Aostralia sy Nouvelle-Zélande hatramin'ny 27 Janoary 2022
Vaovao Mafampana Aostralianina • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Cruising • Vaovao Vaovao Vaovao Vaovao • Vaovao • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News
Princess Cruises dia manohy mikasa ny hanohy ny fitsangantsanganana an-tsambo any Etazonia
Mitohy ny vaovao ratsy ho an'ny indostrian'ny fitsangantsanganana an-tsambo sy ho an'ireo mpandeha any Aostralia na any Nouvelle-Zélande, na ireo izay te-hidina ao anaty zotram-pitaterana dia mitohy farafaharatsiny hatramin'ny 27 Janoary. Midika izany fa tsy misy fitsangantsanganana an-tsambo mankany Australia Australia sy New Zealand momba ny Princess Fitsangatsanganana an-tsambo sy azo inoana fa hafa.
Princess Cruises dia manitatra ny fiatoany amin'ny fialan-tsasatra fitsangatsanganana an-tsambo any Aostralia / Nouvelle-Zélande ka hatramin'ny 27 Janoary 2022,
Izany dia vokatry ny fisalasalana manodidina ny fiverenan'ny fitsangantsanganana an-tsambo any amin'ny faritra.
Vokatry ny fanitarana fiatoana, Coral Princess voyages hatramin'ny 17 Janoary dia nofoanana ary Royal Princess sy Sapphire Princess vanim-potoana hatramin'ny martsa 2022 dia nofoanana.
"Nanjary niharihary fa tsy afaka nanatitra ny fanaparitahana ny Royal Princess sy ny Sapphire Princess any Aostralia izahay alohan'ny hanombohan'izy ireo ny dian'ny hemisfera avaratra izay navoakan'izy ireo," hoy i Deanna Austin, Chief Cruises Chief of Commerce. "Fantatray fa ireo vahiny mikasa ny fitsangantsanganana an-tsambo mandritra ny vanin-taona mafana sy fialantsasatry ny taom-baovao dia ho diso fanantenana manokana amin'ireo fiovana ireo, na izany aza, tianay ny hanome fampandrenesana betsaka araka izay tratra ny vahiny mba hahafahan'izy ireo manomana ny fialan-tsasatra azony antoka."
Ho an'ireo vahiny namandrika tamina fitsangantsanganana nesorina, dia azon'ny vahiny atao ny mifindra amin'ny sambo fitsangantsanganana mitovy aminy. Ny fizotran'ny fanovana indray dia hanana tombony fanampiny amin'ny fiarovana ny saran-dalan'ny vahiny amin'ny sambo fitsangatsanganana. Raha tsy izany, ny vahiny dia afaka misafidy cruise cruise ho avy (FCC) mitovy amin'ny 100% amin'ny saran-dalan'ny fitsangantsanganana izay miampy bonus FCC fanampiny tsy azo averina mitovy amin'ny 10% amin'ny saran-dàlana fitsangantsanganana ($ 25 USD farafahakeliny) na famerenana amin'ny laoniny feno ny tany am-boalohany endrika fandoavambola.
Andriambavy dia hiaro ny komisiona an'ny mpitsangatsangana amin'ny famandrihana izay naloa feno ho fankasitrahana ny anjara asa kritika ataon'izy ireo amin'ny asa aman-draharahan'ny sambo fitsangantsanganana.
Ny fampahalalana sy torolàlana farany indrindra ho an'ireo vahiny nasaina voakasik'izany fanafoanana izany, sy ny fampahalalana bebe kokoa momba ny FCC sy ny famerenam-bola dia azo jerena amin'ny Internet Fampahalalana momba ny sambo fitsangantsanganana voadona & voafafa.